Taageerayaasha RAYS oo gunaanadkii ololahooda dhoolatus ka dhigay Hargeysa | FooreNews
Home wararka Taageerayaasha RAYS oo gunaanadkii ololahooda dhoolatus ka dhigay Hargeysa
Taageerayaasha RAYS oo gunaanadkii ololahooda dhoolatus ka dhigay Hargeysa
FoorenewsNov 24, 2012wararka0
Hargaysa (Foore)- Urur siyaasadeedka Rays ayaa shalay ololihiisa doorashooyinka dawladaha hoose ee caasimadda kusoo khatimay dhoolatus ay ku mareen jidadka waawayn ee magaaladda.
Dadweynaha oo watay gaadiid ay saaran yihiin codbaahiyeyaal iyo sawirada musharixiinta urur siyaasadeedka Rays uga sharaxan magaalada Hargaysa, taageerayaasha urur siyaasadeedkaas ayaa isugu biyo shubtay xarunta beerta xorriyada, halkaas oo ay kala hadleen dhamaan musharixiinta uga sharaxan urur siyaasadeedka Rays.
Guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee urur siyaasadeedka Rays Aadan Axmed Cilmi (Dhoolayare) oo isaguna la hadlay taageerayaasha isu soo baxay ka dalbaday inay sidaa wanaagsan ee ay isugu soo baxeen maalinta codbixintana isugu yimaadaan, isla markaana ay codkooda siiyaan musharixiinta urur siyaasadeedka Rays.
“Waxaanu aad iyo aad uga xunnahay in xukuumaddii dhinac noqotay oo ay ururradii ka wada bixin wayday kharashkii muraaqibiinta, isla markaana ay ka bixisay oo keliya xisbigii KULMIYE ee ay lahayd, taasina waa ayaan-darro in xukuumaddu sidaa yeesho mar haday tahay dawladdii dadka u dhaxaysay. Anagu haddaanu nahay ururka Rays, waxaanu idiin ballan-qaadaynaa inaanu wax u qabano dadka jilicsan ee la iska ilaaway waxaanu u taaganahay inaanu dhalinyarada iyo shaqaalaha wax u qabano oo aanu shaqaaluhu noqon kuwo markastaba baahan.
Waxaanu samayn doonaa guryo aanu u dhisno shaqaalaha dawlada. Waxaanu idiin balan qaadaynaa inaanu isbedel ku samayno caasimaddan ka aradan adeegyadii bulshada, isla markaana aan lahayn meel kaliya oo biyo mareeno ah.” ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka Aadan Axmed Cilmi (Dhoolayare) oo la hadlayay kumanaan taageerayaasha ururka Rays ah ee isugu soo baxay fagaaraha beerta xoriyadda ee caasimada Hargaysa.
Waxa kale oo uu guddoomiye ku-xigeenka ka hadlay qaabka ay u soo banana-baxaan taageerayaasha urur siyaasadeedka Rays waxaanu yidhi “Inagu hadDaynu nahay urur siyaasadeedka Rays waxaynu nahay ururka ugu akhlaaqda wanaagsan ee markasta ilaaliya anshaxa suuban iyo dhaqanka wanaagsan waxa kale oo aynu nahay ururka markastaba ilaaliya nabadgelyada ee marwalba dhawra ammaanka.”
Waxa kale oo uu taageerayaasha urur siyaasadeedka Rays ugu ballan-qaaday hadday doortaan inay degdeg u arki doonaan isbedel dhab ah oo waxqabad.
Sidoo kale waxa taageerayaashaas la hadlay la hadlay 25-ka musharax ee caasimadda Hargeysa uga sharaxan urur siyaasadeedka Rays, kuwaasoo taageerayaashooda ka codsaday inay codkooda siiyaan.
Previous PostMadaxweyne Ku xigeenka Somaliland Oo si Balaadhan Loogu soo dhaweeyay Gobolka Gabiley Maalintii labaadna ku guda jira booqashadiisa Next PostHARGEYSA: Wacdarihii Xisbiga KULMIYE ku soo khatimay kaltankiisa Ololaha doorashadda Deegaanka